Ajajaafi Sodaachisa Trump Ilalchisee Yaadota Gorsafi Hubachiisa – Kichuu
HomeNewsAfricaAjajaafi Sodaachisa Trump Ilalchisee Yaadota Gorsafi Hubachiisa
Ajajaafi Sodaachisa Trump Ilalchisee Yaadota Gorsafi Hubachiisa
Ajajaafi Sodaachisa Trump Ilalchisee Yaadota Gorsafi Hubachiisa Tokko Tokko Jawar Mohammed’n
HUBACHIISA1: Akkuma dhagayaa jirru uggurri Trump lammiileen biyyoota torba Ameerikaa akka hin seenne dabarse rakkoo guddaa uume jira. Biyyoota torban kana dabalatee resettlement baqattoonni biyyoota kamiituu baatiilee afran as deemaniif akka hin seenne mirteesaee jira. Biyyoonni torba maqaa haa dhayamanii malee murtiin kun lammiilee biyya biraatifis bahuufi seenuu irratti cinqii uumuuf akka maluu shakkama. Kanaafuu warri passport biyya kanaa hin qabne green card yoo qabaattanillee hamma dubbiin tun adda baatuu imala kamiiyyuu godhuu osoo baattanii wayya jedhamaa jira. Dhimma kanarratti OMN ogeeyyii seeraa dhiheese barnoota gahaa dhiheessuuf karoorfatee jira.
HUBACHIISA 2: Qajeelfamni Donald Trump lammiileen biyyoota torbaa akka Ameerikaa hin seenne dabarse akka yeroodhaaf hojiitti hin hiikamne manni murtiii federaalaa murt essee jira. Kana jechuun hanga seerummaan murtii pirazidantichaa guututti xaddacha mana murtiitin madaalamutti namoonni karaa seeraatin dirree xayyaaraa Ameerikaa seenan hidhamus ta’e biyya irraa dhufanitti deebifamuu hin qaban jechuudha. Garuu ammas wantoonni ifaa hin ta’in hedduutu jira. Fakkeenyaaf ajajni mana murtii kun namoonni erga Ameerikaa seenani hidhamuu ykn ari’amuu hin qaban jedha malee biyya irraa ka’anirraa gara Ameerikaatti imaluuf xayyaara yaabbachuun ni hayyamamoo hin hayyamamuu wanni ifa tahe hin jiru. Akkasumas uggura dimshaashaa baqattoota biyya hundaarra kaayame ilaalchisee manni murtii kun waan jedhe hin qabu. Dhimma kana irratti murtiileefi ibsoota dabalataan bahan faana buunee isin beeksifna. Ammaaf:
– Namoonni keenya biyyoota biraatirraa dhuftanii dirree xayyaaratti qabamtan saffisaan maatii fi abukaatoo qunnamuun mirga manni murtii kun dabarsetti fayyadamaa.
– Warri passport Ameerikaa osoo hin qabaatin biyya biraa deemuuf karoorfattan hamma dubbiin tun sirritti ifa baatuu karoora keessan osoo jijjiirtanii gorfama. ( keessattuu warri Passport Ameerikaas qabaattanii akka lammii Soomaliyaatti dura dhuftan rakkoo cimaatu isin mudachuu mala)
– Ajajni pirazidantichaa kun namoota biyyoota Muslimaa irratti haa xiyyeefatu malee baqattoota hundaafu cinqii dabaltaa akka qabu beekuun barbaachisadha. Keessattuu nuti biyyota uggurri kun irra kaayame lamaaniin ( Suudaan fi Somaaliyaa ) waan daangeffamnuuf bifaanis waan wal fakkaannuuf dirree xayyaaratti shakkiidhaan dararamuun ni dabala. Kana beekuun yeroo imala biyya keessaas tahee biyya alaatiif deemnu security dirree xayyaaraa bira yoo geenyu dhiibbaan dabalataa jiraachuu waan maluuf sammuun ( psychologically) of qopheessuu barbaachisa.
GORSA DABALATAA AJAJA TRUMP ILAALCHISEE:
– Namoonni green card ( hayyama Ameerikaa jiraachuu) qabdaniifi yeroo ammaatti Amaarikaan ala jirtan, as deebi’uudhaaf osoo xayyaara hin yaabbanne dura abukaatoo biyyanaa qunnamaatii waan godhuu qabdan irratti gorsa gaafadhaa
– Gara Ameerikaa imaluuf yeoo qophooftanii jiraattan guca seeraa G-28 jedhamu, kan abukaatoon immigreeshinii akka isinii dhaabbatu mijeessu, dursaa guutaa
– Warri Green Card qabdan gara Ameerikaa yoo deebitan dirree xayyaaraatti foormii I-407 guutaa yoo isiniin jedhan DIDAA. Foormii I-407 kana yoo guuttan hayyama biyya kana jiraachuu (green card) keessan fedhii keessaniin gadi lakkiftan ( haqxan) jechuudha. Gara biyya irraa dhuftanitti deebifamtan, deebitaniis dhufuu hin dandeessan. Irra deebina, wanni fedhes dhufu foormii I-407 jedhamu guutanni hin mallatteessiinaa!!
Trump Order Sees 300 Somali Refugees Stuck in Nairobi After
Is President Trump’s administration reminiscent of George Orwell’s “1984”?